Nkọwa Nrọ - Nkọwa & Dictionary
Kedu ihe nrọ na agwọ na-apụta?
Kedu ihe ọ pụtara na nrọ nke nwa ọhụrụ?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nrọ nke nsị ma ọ bụ nsị?
Nrọ nke mmụọ
Gịnị ka ọ pụtara n ’nrọ nke ekwensu ma ọ bụ ndị mmụọ ọjọọ?
Kedu ihe ọ pụtara na nrọ nke ndị amoosu na amoosu?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ ịkwa ákwá?
Kedu ihe ọ pụtara na nrọ na ị na-akụ akwa ma ọ bụ na-akwa gị?
Pụtara na nrọ banyere urinating
Pụtara na nrọ nke ezé ma ọ bụ na ezé gị dapụ
Kedu ihe ọ pụtara na nrọ na agbagburu gị ma ọ bụ gbaa gị?
Gịnị ka ọ pụtara n ’nrọ na ị laghachitela n’aka onye nweburu gị?
Gịnị ka ọ pụtara n ’nrọ mmiri?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nke mmiri doro anya?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ mmiri ruru unyi?
Pụtara nke nrọ banyere mmiri dị ọcha
Gịnị ka ọ pụtara n ’nrọ banyere ududo?
Kedu ihe ọ pụtara na nrọ nke anụ ọhịa?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nrọ nke akpị ma ọ bụ akpị?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nke whale?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nke ịnyịnya ígwè?
Kedu ihe nrọ nke ihe mkpofu pụtara?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ ịsa ahụ?
Gịnị ka ọ pụtara n ’nrọ ọchịcha?
Gịnị ka ọ pụtara nrọ maka coronavirus?
Gịnị ka ọ pụtara nrọ nrọ nke agụ iyi?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nke ebe a na-eli ozu?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nke chocolate?
Mụ na D.
Gịnị ka nrọ na ezé pụtara?
Gịnị ka ọ pụtara n ’nrọ na ezé gị na-adapụ?
Kedu ihe nrọ nke dolphins pụtara?
Gịnị ka ọ pụtara na nrọ ịbụ onye gba ọtọ?
Kedu ihe ịtụ nrọ maka ego?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nrọ nke steepụ?
Kedu ihe ọ pụtara na nrọ nke nnọkọ oriri na ọ ?ụ ?ụ?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nke ndị mmụọ?
Gịnị ka nrọ nke agha pụtara?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nke ndị dike?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nwamba?
Gịnị ka nrọ nke akọrọ pụtara?
Gịnị ka ọ pụtara n ’nrọ ọkụkọ?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nke ikpuru?
Kedu ihe ọ pụtara na nrọ nke ụlọ ọgwụ?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nke ndanda?
Gịnị ka ọ pụtara n ’nrọ ị na-eme onwe gị nzuzu?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nrọ nke àkwá?
Ndị ọzọ lyrics
M na L
Ezinaụlọ na ndị enyi
Womenmụ nwanyị na ụmụaka
Nrọ ndị ọzọ
Nkọwa nrọ - nkọwapụta & akwụkwọ ọkọwa okwu
You nwere mmasị ịmara ihe ntụgharị na ihe nrọ gị pụtara? You nwetụla mgbe ị na-eche banyere nro ahụ na-emeghachi ugboro ugboro ma ghara ikwe ka ị zuo ike? Kedu ihe ụbụrụ na-achọ ịkọwara gị mgbe ị na-ehi ụra na olee otu anyị ga-esi nwee nkọwa ziri ezi banyere echiche abalị anyị?
Nwere ike ọ gaghị ama ya, mana n'abalị ụbụrụ anyị ka na-arụ ọrụ ma nwee ike nrọ n'agbanyeghị otu ụbọchị gwụrụ. Ihe bụ ihe ọzọ, onye ọ bụla nrọ anyị nwere bụ kpam kpam dị iche iche, gaa n'ime akaụntụ pụtara nrọ na ịmụ ịkọwa atụmatụ ya dị mgbagwoju anya ga-enyere gị aka ịmata onwe gị nke ọma karị.
Omumu ihe putara na nkọwa nrọ Ọ bụ ihe na-enye ụmụ mmadụ nsogbu ma na-atọ ha ụtọ kemgbe ụwa. Ọ bụ ezie na n'oge ochie nkọwa nke akara ngosi nrọ chọrọ ịchọta ozi sitere n'aka Chineke, site na narị afọ nke XNUMX na mmepe nke akparamaagwa, a na-eji nkọwa nke nrọ ekpughere ọdịnaya echekwara n'echeghị echiche mmadụ ma ọ bụ nchegbu nke ụbọchị. na-enye anyị nsogbu n'etiti ndị ọzọ.
Ugbu ekele maka ndị ọkachamara psychoanalysts dị ka ama Sigmund Freud, onye French Jean Laplanche na Jean-Bertrand Pontalis ma ọ bụ Switzerland Carl Gustav Jung nkọwa nrọ akwụsịla ịhụ dị ka ihe na-adịghị njọ ma bụrụ usoro ọgwụgwọ. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị n’isiokwu a, ebe a ị nwere njikọ nke akwụkwọ ntanye akwụkwọ na ọkacha mmasị m ndị ode akwụkwọ.
1 Chọpụta ihe nrọ pụtara n'efu na akwụkwọ ọkọwa okwu anyị pụrụ iche
2 Nkọwa okwu nrọ: ịkọwapụta agaghị abụkwara gị ihe omimi
3 Mee nkọwa nrọ ma chọpụta ihe ọ pụtara
4 Nkọwa na ihe nrọ pụtara
5 Thekọwa Nrọ n'Agba Ochie
6 Gịnị na-arọ nrọ?
7 Psychoanalysis na nkọwa nke Freud
8 Usoro nyocha nke Carl Jung
9 Dictionary iji kọwaa ihe nrọ pụtara
10 Onye ka m bu?
11 Kedu ihe nkebi nke ụra
11.1 Oge nke m: nkwụsịtụ ọkwa
11.2 Na-adọ II: ìhè ụra ogbo
11.3 Oge nke atọ: usoro mgbanwe
11.4 Oge nke anọ: ụra ụra miri emi
11.5 REM ụra oge
12 Kasị nkịtị nrọ
13 Ndụmọdụ iji cheta nro nke ọma
14 Nrọ nke nrọ
Chọpụta ihe nrọ pụtara n'efu na akwụkwọ ọkọwa okwu anyị pụrụ iche
Na usoro ndị a ị nwere ike ịchọta ndepụta nke nyere iwu ka nrọ nrọ si AZ, iji mee ka ọ dịrị gị mfe iji weebụ. Nrọ ndị a niile bụ ngwakọta n’etiti nchịkọta nrọ ndị kachasị mkpa nke ndị ode akwụkwọ a ma ama na ụfọdụ onyinye m dabere na ahụmịhe m na nrọ ndị m tara ahụhụ na m nyochara ma mụọ nke ọma ọtụtụ afọ.
Ọ bụ ndepụta zuru oke mana ọ na-aga n'ihu na mgbanwe na-aga n'ihu, Ọ bụrụ n ’nrọ ị na-echegbu gị na nke ahụ na-ekwughachi onwe ya ọ pụtaghị na ndepụta m na-arịọ gị Dee m ozi site na ngalaba kọntaktị nke weebụ m ga-enyocha okwu gị wee tinye nrọ ahụ na ndepụta ahụ ka ndị ọrụ ndị ọzọ wee mara banyere ya.
Oge eruola ịchọta nrọ ahụ na-echegbu gị. Lee ị nwere ndepụta ahazi mkpụrụedemede.
Nrọ ndị na-amalite site na A
nrọ na ọla ntị
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nke akpati ozu?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nke ụgbọ ala, ụgbọ ala ma ọ bụ ụgbọ ala?
Gịnị ka nrọ nke igbu ọchụ ma ọ bụ igbu ọchụ pụtara?
Kedu ihe ọ pụtara na nrọ nke ndị enyi?
Gịnị ka nrọ ndị mmụọ ozi pụtara?
Gịnị ka ọ pụtara maka nrọ nke a ofụ?
Gịnị ka ọ pụtara n ’nrọ nke agịga?
Kedu ihe ọ pụtara na nrọ nke ụgbọ elu?
Nrọ ndị na-amalite na B
Nrọ maka ụlọ mposi ruru unyi
Gịnị ka ọ pụtara na nrọ nke slugs?
Kedu ihe ọ pụtara na ikwiikwii na ikwiikwii?
Gịnị ka ọ pụtara n ’nrọ égbè?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nke ụmụ ahụhụ na ahụhụ?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nrọ?
Nrọ ndị na-amalite na C
nrọ nke ịnya ụgbọ ala
Kedu ihe ọ pụtara na nrọ nke agwọ?
Gịnị ka ọ pụtara n ’nrọ ịdaba ihe efu?
Gịnị ka ọ pụtara na nrọ nke crabs?
Gịnị ka ọ pụtara n ’nrọ crows?
Nrọ ndị na-amalite site na D.
nrọ na elf
Nrọ nke iwepụ
Gịnị ka ọ pụtara n ’ịlụ ọgụ ma ọ bụ ịrụ ụka?
Nrọ ndị na-amalite site na E
Kedu ihe ọ pụtara na nrọ nke enyi gị mbụ ma ọ bụ enyi nwanyị mbụ?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ enyí?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ maka afọ ime?
Nrọ ndị na-amalite na F
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nke Facebook?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ ọkụ?
Kedu ihe nrọ nke mkpụrụ osisi pụtara?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nrọ nke okooko osisi?
Gịnị ka ọ pụtara n ’nrọ ndị ikwu nwụrụ anwụ
Nrọ ndị na-amalite na G
Nrọ ndị malitere na H
Nrọ ndị malitere na m
Gịnị ka ọ pụtara na nrọ nke iju mmiri?
Gịnị ka ọ pụtara n ’nrọ chọọchị?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nke ekwesịghị ntụkwasị obi ma ọ bụ ịghọ aghụghọ?
Nrọ ndị na-amalite na L
Gịnị ka ọ pụtara n ’nrọ gbasara ikpuru?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nrọ nke ọdụm?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nrọ nke anụ ọhịa wolf?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nrọ nke ngwere?
Kedu ihe ọ pụtara n ’nrọ mmiri ozuzo?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nke labyrinth?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nrọ nke igodo?
Nrọ ndị na-amalite na M
Gịnị ka ọ pụtara n ’nrọ na e gburu gị?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ igbu ọchụ?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nke akpati?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nrọ ijiji?
Gịnị ka ọ pụtara n ’nrọ ọnwụ?
Gịnị ka ọ pụtara n ’nrọ mmadụ nwụrụ anwụ?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nke mkpụrụ ego na akwụkwọ ego?
Nrọ ndị malitere na N
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nke nọmba?
Gịnị ka ọ pụtara n ’nrọ igwu mmiri?
Gịnị ka ọ pụtara n ’nrọ ụmụaka?
Gịnị ka ọ pụtara na nrọ nke snow?
Nrọ ndị na-amalite site na O
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nke ọla edo?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ maka nnukwu ebili mmiri?
Kedu ihe ọ pụtara n 'nrọ nke ouija?
Nrọ ndị na-amalite na P
nrọ banyere achicha
Kedu ihe ọ pụtara na nrọ nke ọrịa na-efe efe?
Gịnị ka ọ pụtara n ’nrọ banyere Igwu?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nrọ nke ebe igwu mmiri?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nke nkịta?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nke azụ ma ọ bụ azụ?
Nrọ na a na-achụ gị ma ọ bụ na-achụ gị
Kedu ihe ọ pụtara nrọ ndị uwe ojii?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nke nduru?
Nrọ ndị na-amalite na R
Gịnị ka ọ pụtara n ’nrọ ụmụ oke?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ maka uwe?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nke toads na frogs?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nke elekere?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nke osimiri?
Nrọ ndị na-amalite na S
Kedu ihe ọ pụtara na nrọ nke ọbara?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ ịtọrọ mmadụ?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nke zombies?
Nrọ ndị na-amalite na T
nrọ na frets
Gini ka o bu nro nke azu shark?
Gịnị ka nrọ nke oke ehi pụtara?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nke tsunami?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nrọ nke ala ọma jijiji ma ọ bụ ọmajijiji?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nke agụ?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nke tarantulas?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nke mbe?
Gịnị ka ọ pụtara n ’nrọ ala?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nrọ nke oké ifufe na ifufe?
Nrọ ndị na-amalite site na V
Kedu ihe ọ pụtara nrọ maka njem ma ọ bụ njem?
Kedu ihe ọ pụtara banyere nrọ banyere ehi?
Kedu ihe ọ pụtara na nrọ nke ugwu mgbawa?
Gịnị ka ọ pụtara n ’nrọ ife ofufe ma ọ bụ nnweta?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ nke uwe agbamakwụkwọ?
Gịnị ka ọ pụtara n ’nrọ ịgbọ agbọ?
Kedu ihe ọ pụtara nrọ na vampires?
Ozugbo anyị hiri ụra, anyị na-aga njem dị egwu na-egosipụta ọchịchọ anyị na egwu anyị. Oge izu ike na-aghọ njem nke nsogbu nke ụbọchị, kwa nchegbu ndị na-emetụta uche anyị, ya mere ọ dị mkpa ịghọta nkọwa nrọ dokwuo anya ihe o putara.
Nkọwa okwu nrọ: ịkọwapụta agaghị abụkwara gị ihe omimi
N'oge ochie, ọdịbendị gbalịrị ịchọpụta otu esi akọwa nrọ ọ bụla, ụfọdụ sitere na usoro ihe omimi na esoteric, mana ndị ọzọ gbasoro usoro sayensị. Nke ahụ bụ, dị ka ọ bụla na mmepeanya ndị ọzọ, e nwere ndị amaara ama na ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ.
Ihe ọ bụla na - eme n’ụche anyị mgbe anyị na - arọ nrọ nwere ike idozi ọtụtụ obi abụọ anyị na - enweghị ike ịkọwa n’oge anyị na - eteta. Ikekwe nke a bụ ihe kpatara ụmụ mmadụ ji were ọtụtụ narị afọ na-agbaso ihe ha pụtara mara ihe niile banyere uche na njirimara onwe nke onwe.
Mee nkọwa nrọ ma chọpụta ihe ọ pụtara
Ànyị nwere nrọ nrọ tupu oge eruo? Kedu ihe kpatara ha ji anọchite anya ọchịchọ anyị na egwu anyị? Gini mere ihe omimi ji eme ka ndi mmadu ghara ichota ihe? Mgbe ụfọdụ, ọ nwere ike iju anyị anya na mgbagwoju anya nke nrọ. Anyị na-arọ nrọ na anyị agaghị enweta ọrụ, na onye òtù ezinụlọ nwụrụ ma ọ bụ na anyị ga-etisa onye anyị na ya bi. Nke ahụ bụ, ha dị nrọ ndị metụtara gburugburu anyị, na mgbe ụfọdụ ha na-adị ka ihe mere eme nke mere na anyị na-achọ ihe ọ pụtara maka ozi nrọ ahụ nke ụbụrụ na-ezigara anyị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịchọpụta -esi mee ka a nkọwa ziri ezi nke gị nrọ pịa ebe a.
Nkọwa na ihe nrọ pụtara
Ndifiọk se ndap ọwọrọde idịghe ukem ye edisiak ndap. Iji mata otu esi akọwa nrọ ọ bụla, ọ bụghị naanị na ị ga-amata ihe ọ pụtara nke ọma, mana ọ dịkwa mkpa ka ị mara nkọwa ndị ọzọ dị mkpa na ihe gbara ya gburugburu nke ha na-eme, ebe ọ bụ na otu nrọ ahụ nwere ike ịnwe ọtụtụ nkọwa dị iche iche na ndị dị iche iche ebe ọ ga-emetụta ihe nke ahụ pụtara pụtara dịka ụzọ gị, ezinụlọ gị, gburugburu gị, ọnọdụ ịhụnanya gị, ahụike gị ma ọ bụ ọbụlagodi ọnọdụ ego gị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụghị otu nrọ ọla edo ọ bụrụ na ị bara ọgaranya karịa ma ọ bụrụ na ị dara ogbenye. Na njedebe nrọ ahụ bụ otu, mana nkọwa ahụ dị ezigbo iche.
Thekọwa Nrọ n'Agba Ochie
Ndị Gris nwere mmasị na isiokwu a. Ma n'oge ahụ, usoro ọdịnala ya iji kọwaa nrọ na-achịkwa ọdịnala a na-edeghị ede. Nke ahụ bụ, echiche ndị ahụ niile sitere n'ọgbọ ruo n'ọgbọ na ọtụtụ akụkụ, bụ uche nke chi ihe a hụrụ na nrọ ndị ahụ.
Ma n'akụkụ nke ọzọ nke nkwenkwe a, ndị edemede dị ka ọkà ihe ọmụma Plato ma ọ bụ Aristotle Ha dekwara echiche ha n’okwu a n’ime akwụkwọ dịka Republic of the first na About Dreams of the nke abụọ. N’agaghị echefu nke ahụ, obere oge mgbe nke ahụ gasịrị, Pythagoras kwukwara okwu n’okwu a dị ka ụzọ nkwukọrịta maka ndị mmụọ karịrị mmadụ. Mgbe ndị Stoik na-nzọ nzọ na nduzi. Ka oge na-aga, echiche ọhụrụ nke Cicero ma ọ bụ Artemidoro ga-abịa.
Gịnị na-arọ nrọ?
Nwa ịkọ nkọ ihe na-eme gburugburu anyị, na site na nrọ, a na-akpọ nrọ. Mana sọọsọ nro, nihi na mgbe abaria di nkpuru, ekwuru na ekwensu bidoro ha ma ha ekwesighi inyocha ha Ọ bụ eziokwu na n'agbanyeghị echiche niile dị, nke a usoro ịgba afa, dabere na ọmụmụ nke Sigmund Freud.
Psychoanalysis na nkọwa nke Freud
Offọdụ echiche ma ọ bụ ọmụmụ nke ga-eso Freud nweelarị ndabere ha na ihe anyị kwurula. Nke ahụ pụtara, ha agaghị abụ akwụkwọ ọhụụ, ebe ọ bụ na ọdịnala dị na ha. Ma, ọ bụ ezie na ọ bụ okwu siri ike iji nyochaa, a ghaghị ikwu na Freud bịara tinye isi ma soro. Achọrọ m igosi nke ahụ ihe nnọchianya gosipụtara na nrọHa metụtara echiche anyị na amaghị ihe ọ bụla.
Maka nke a, mgbe anyị na-enyocha nrọ, anyị kwesịrị iwere echiche na echiche niile anyị hụrụ na ya ma ghara ịnọrọ naanị otu. Agaghị agbakwunye usoro nkwenkwe ụgha ma ọ bụ nkọwa nke ụdị echiche. Njikọ na mmekọrịta anyị na ndụ anyị kwa ụbọchị ga-abụkwa nnukwu mkpa. N'ime nrọ niile, Freud kpọrọ aha 'ụdị nrọ' maka ndị na-abịakwute anyị. Dịka ọmụmaatụ ndị metụtara ọnwụ ma ọ bụ ọdịda. Ebe ọ bụ na ha niile nwere ike ime ka esemokwu dị n'ime pụta ìhè. Na nkenke, o kwuru na nrọ bụ ụzọ dị n'ime ime anyị na ọchịchọ anyị zoro ezo.
Usoro nyocha nke Carl Jung
Ọ bụrụ na anyị amụla Freud, ọ bụ eziokwu na anyị agaghị echefu Jung. Ọ dịkwa mgbagwoju anya na echiche nke mbụ, mana onye Switzerland psychiatrist gara n'ihu. N'ikwu okwu sara mbara, nrọ maka ya bụ ihe sitere n'okike. Kwa ụbọchị ọ na - ahụ ndị ọrịa ya nsogbu nro na nrọ na nrọ ndị a gbakwunyere ụfọdụ. akụkọ ifo.
N'ihi ya, ọ chọpụtara na ọ bụghị mgbe niile ka mmadụ na onye ọzọ na-emekọrịta ihe. Ọ bụ ya mere o ji kpọọ ya mkpokọta. Ihe a niile ga - abụ ụdị akara ngosi omume nke ụmụ mmadụ ketara eketa na enwere ike ịkọwa ya dị ka ihe ochie mgbe ochie ma ọ bụ ụfọdụ mmetuta nke ndu. Yabụ na nkenke, ihe Jung chọrọ ịkọwa bụ nke ahụ nrọ nwere ihe ọ pụtara site na ahụmịhe anyị ha g wouldbu-kwa-ra ihe nkpuru-obi nile chọrọ.
Dictionary iji kọwaa ihe nrọ pụtara
Ọ bụ ezie na ezigbo akụkụ nke nrọ na-achịkwa isiokwu, enwere ọtụtụ ihe nwere nkọwa pụtara nke ọma. Nnyocha dị omimi nke ihe ndị a enyerela ịnakọta data niile na a Akwụkwọ ọkọwa okwu nrọ, akwukwo nke onye obula g’eji tugharia ihe ha.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị chọpụta ihe nrọ pụtara, Ghọta ihe ha na-anọchite na akara ha, jiri akwụkwọ ọkọwa okwu nrọ anyị ị nwere ike ịmịnye ozi niile kpamkpam. Ga-amata onwe gị nke ọma site na ozi nke uche gị na ị ga-ama otu esi akọwa ezigbo nchegbu gị. Gbanye pụtara-suenos.com ị ga-enwe ike iru ogo dị omimi nke nyocha onwe onye na mmelite ime mmụọ site na ịchọ ihe ọ pụtara.
Onye ka m bu?
Aha m bụ Nacho Zarzosa na abụ m onye n'azụ weebụsaịtị a. Enwere m ogo mmụta na akparamaagwa site na Ngalaba nke Psychology nke Mahadum Oviedo na nnukwu obi uto banyere ihe nrọ na psychoanalysis pụtara. Nwere ike ịhụ ozi niile gbasara m na ịpị ebe a.
Kedu ihe nkebi nke ụra
Mara ụdị ụra dị iche iche nwere ike inyere anyị aka ịna-ehi ụra nke ọma ma zuru ike nke ọma. Nke a bụ ihe na - emetụta ọtụtụ ihe anyị na - atụ anya ya, yabụ ịmara usoro nke ọma dị mkpa.
Oge nke m: nkwụsịtụ ọkwa
Ọ bụ ọkwa mbụ ma gụnye ya Iri ụra 10 mbụ, site na mgbe anyị na-eteta ruo mgbe anyị na-ero ụra ntakịrị.
Na-adọ II: ìhè ụra ogbo
Akụkụ nke abụọ nke ụra nwere oge nke ihe dị ka ọkara oge ụra dum na ọ bụ ogbo nke ahụ gị ji nke nta nke nta pụọ ​​na gburugburu ebe n'otu oge obi obi na iku ume ngwa ngwa ọ na-adị jụụ ma na-atọkwu ụtọ. N'oge a, ọ na-esiri anyị ike ịmụrụ anya, mana n'agbanyeghị nke ahụ n'ụdị ụbụrụ anyị nke ụbụrụ buru ibu na ndị ọzọ dị obere. Dị ka ọ dị, mgbe anyị tetara n'ụra a, anyị na-eme ya n'ụzọ dị ịtụnanya, dịka ọmụmaatụ mgbe anyị rọrọ nrọ na anyị ga-eme njem ma ọ bụ daa n'elu ugwu.
Oge nke atọ: usoro mgbanwe
Agba nke atọ kachasị dị mkpụmkpụ, na-adịgide ihe dị ka nkeji 2 ma ọ bụ 3 na mkpokọta ma bụrụ a mgbanwe n'etiti ụra ụra na ụra ụra miri emi.
Oge nke anọ: ụra ụra miri emi
Oge ụra miri emi na-adịgide maka 20% nke ụra zuru ezu ma ọ kachasị mkpa n'ihi na ọ na-ekpebi ogo izu ike na ike ahụ iji weghachite na ike ọgwụgwụ ụbọchị. Akụkụ iku ume dị ezigbo ala ma mgbali obi na-agbadata nke ukwuu, ya mere, ọ na-esiri anyị ike ịmụrụ anya site na nke a.
REM ụra oge
Oge ụra nke REM na-etinye 25% nke ụra anyị. Aha REM sitere na Rapid Eye Movement na Bekee ma ọ pụtara na anya na-agagharị mgbe niile n'okpuru nku anya. Ọrụ ụbụrụ n'oge ọkwa a dị oke elu, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ọkwa dị ka mgbe anyị na-amụ anya ma n'otu oge ahụ a na-egbochi akwara anyị iji gbochie anyị imeghachi omume na ozi niile ụbụrụ anyị na-arụ. N'oge nke a ụra na-eme ya mere, ọ bụ ihe kachasị mkpa iji tinye akaụntụ na weebụsaịtị a.
Kasị nkịtị nrọ
Ọ bụghị nrọ niile dịka otu, e nwere nrọ na ọtụtụ mmadụ na-ata ahụhụ, dịka ọmụmaatụ nrọ banyere gị bụbu ma obu nrọ nke ịlaghachi na nke gị ọzọ, rọọ nrọ, nrọ banyere nsị, nrọ nke ife efe, nrọ banyere egbe o nrọ nke ịdaba na efu. Ọ bụ ezie na ndị ọzọ dị obere dị ka nrọ banyere ndị uwe ojii. Nwee otu nrọ ma ọ bụ nke dị egwu enweghị ike ịkọwa ya dị ka ihe ọma ma ọ bụ ihe ọjọọ. N'otu aka ahụ, nrọ dị egwu na otu onye nwere ike bụrụ ihe nkịtị na onye ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ịchọrọ maka ndị uwe ojii bụ ihe a na-ahụkarị ma ọ bụrụ na ọrụ gị metụtara ndị uwe ojii, dịka ma ị na-arụ ọrụ n'ụlọ akụ ma ọ bụ na ụlọ ọgwụ.
Ndụmọdụ iji cheta nro nke ọma
You chọrọ icheta ihe niile gbasara nrọ nke ọma ka oge na-aga ị ga-ahụ ihe ọ pụtara? ’Ana m atụ aro ka ị tinye a akwukwo na pen iji dee ihe nile ihe ị na-echeta site na nrọ gị ozugbo ị tetara. Cheta na nkowa ọ bụla bara uru, dịka o nwere ike ịpụta ọtụtụ mgbe ọ bịara ịkọwa ya nke ọma. Emechaa, mgbe ị mechara ụbọchị gị, tinye akwụkwọ ọkọwa okwu anyị wee mụọ akara nke mmemme ọ bụla iji ghọta ya nke ọma.
Nrọ nke nrọ
N'ụzọ dị otú a, ị ga-ahụ ọ bụghị naanị nrọ na ihe ha putara, ma ị pụrụ ịmụta Gịnị ka ọ pụtara n ’nrọ banyere Igwu ma ọ bụ pụtara nrọ banyere ọchịcha, yana Nkọwa na isi nrọ banyere ego ma chọpụta ihe nzuzo dị n’ime omimi nke uche gị. Site ugbu a gaa n’ihu, ị nweghịzị ihe ngọpụ iji nyochaa ihe nrọ pụtara ma mara onwe gị nke ọma karịa kwa abalị.
Esi kọwaa nrọ
2022 | meanings-suenos.com: akwụkwọ ọkọwa okwu nke nrọ & nkọwa | Site na Nacho Zarzosa